Hiran State - News: HS:-Faah faahin ka soo baxeysa shirka lagu wado inuu ka dhaco magaalada London.
HS:-Faah faahin ka soo baxeysa shirka lagu wado inuu ka dhaco magaalada London.
HS:-Faah faahin ka soo baxeysa shirka ay marti galineyso dowlada Ingiriiska, maxaadse kala socotaa qodobada looga hadlayo shirkaas?
Kadib shirar badan oo Somalida loogu qabtay wadamo badan oo ka mid ah bariga Africa sida Ethiopia iyo Kenya,waxaa hada muuqata in beesha caalamku u soo jeesatay arimaha Somaliya hadaba warar horu dhac ah oo ka soo baxaya shirkaasi ayaa sheegaya in looga hadli doono.
Dib u heshiisiinta iyo nabd ku soo dabaalida Somaliya.
sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu shirkaasi noqon doono midkii ugu weynaa ee loo qabto wadan uu dagaal sokeeye ka socday mudo iyadoo ay ka soo qeyb galayaan dowladaha reer galbeedka, jaamacada Carabta iyo African Unionka.
Qodobadaan marka laga soo tago beesha caalamka waxaa ka go,an in Somaliya laga saaro xiliga kumeel gaarka wadankane waxaa lagu wadaa iney la wareegaan doorashada soosocota wajiyo cusub oo aan aheyn kuwa hada jira amaba xilal horey u soo qabtay. waxaa arinta shirkaan bar bar socda sidii lagu bur burin lahaa Burcad badeed Somaliya inta aan la gaarin bisha labaad ee sanadka soo socda oo ah xiliga lagu wado inuu dhaco shirkaasi.
Laakinse Shabaab iyo madaxweyne Shiikh Shariif qorshe kaas ka duwan ayey qabaan.
Madaxweyne Shiikh Shariif, iyo kudhawaad 100 ka mid ah mudanayaasha baarlamanka waxey xubno firfircoon ka yahiin ururka Shabaab iyo Al-qacida qorshaha hada miiska u saaran inta aan la gaarin shirka ay iclaamiyeen dowlada Ingiriiska ee dalka Somaliya looga saarayo fowdada waxaa ka go,an qodobada hoos ku qoran.
1- Marka la xaqiijiyo in ay jabeen kooxda Shabaab iyo ajaaniibta ku sugan Somaliya in dhamaanba ciidamada Shabaab kuwooda ka dagaalama gobolada dalka laga dhigo ciidamada TFGda iyagoo goobahooda joogana ay xirtaan dharka ciidamada, si beesha caalamka loogu sheego in ay dowlada kumeel gaarka la wareegtay guud ahaan koofurta Somaliya.
2- In mudada yar ee madaxweyne Shiikh Shariif joogo amaba xilka hayo xarakada loo tababaro ilaa 3Kun oo ciidamo Somali ah si marka ay Amisom ka baxaan dalka ula wareegaan awooda Mogdisho inta ka horeysana meelo cayiman ku sugnaadaan.
3- In hogamiyaasha Shabaab iyo saraakiishooda magangalyo siiyo madaxweyne Shiikh Shariif oo dejiyo inta laga gaarayo hadafkooda meel ay ku nabad gali karaan (protection).
4- In ururka magaciisa la bedelo oo la qaato magac cusub oo ka gadmi kara shacabka Somaliyeed iyo dowladaha Islaamka.
5- In madaxweyne Shariif meeshiisa ka sii wado dadka isaga ka aqoonta badan amaba ka caansan ee TFGda ku jira sidii loo shirqooli lahaa sidii hada ka horba dhacday oo qaabkii lagu dilay wasiirkii Amniga Cumar Xaashi iyo wasiirkii waxbarashada Professor Cadow uu wax ka ogaa.
6- In dagaal dheer lala galo dowladaha masiixiiyiinta ah oo ay ula jeedaan Kenya iyo Ethiopia oo sida la ogyahay ay ku nool yahiin muslimiin badan iyagoo ay dhiiragaliyeen in la sii wado qaraxyada iyo dhibaatada ka taagan bariga Africa.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo badan ayaa miiska u saaran madaxweyne Shariif iyo kooxda Shabaab oo uu xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo walow hada la sheegayo ineyba ciidamada dowlada ku leeyahiin ciidamo gaar ah oo aan tiradooda la cadeyn laakiinse loo maleynayo ilaa 1200 askari oo intooda badan lagu soo tababaray dalka Ugandha iyadoo ay qorshahii lagu soo tababaray iska kaashadeen saraakiil ka tirsan dowlada iyo madaxweyne Shariif, ciidamdaasi oo dagaalkii dhawaantan ka dhacay Tooraboorada Somaliya amaba xaafada Dayniile dhabarka ka toogteen ciidamo badan oo u dhashay dalka Burundi xili dagaal adag ay ciidamada Amisom kula jireen Shabaab.
La soco wararkeena danbe iyo warbixino xasaasi ah si ay bulshada Somaliyeed u ogaadaan in madaxweyne Shariif xilka uu ku magacaban yahay iyo howlaha uu faraha kula jiro ay kaaf iyo kala dheeri u tahay.
· admin on December 11 2011 11:11:57 · 0 Comments · 1893 Reads ·
14,600,217 unique visits